Dowladda Sacuudiga oo lacag dhan 25 bilyan oo doolar ka heshay saami ay iibisay | Radio Hormuud
Dowladda Sacuudiga oo lacag dhan 25 bilyan oo doolar ka heshay saami ay iibisay
Shirkadda saliida ee Dowladda Sacuudiga ee Aramco ayaa heshay lacag dhan 25.6 bilyan oo doolar markii ugu horeysay.
Shirkadda oo dhawaan soo bandhigtay in ay iska iibineyso saami dhan 1.5 boqolkiiba ayaa haatan saamigaas ka iibisay suuqyada saamiyada caalamka.
Saamiga ay iibisya shirkadda Aramco ayaa ah kii ugu badnaa abid, taas oo ka badan shirkadda Alibaba oo sanadki 2014-ka Magaalada New York ee dalka Mareykanka ku iibisay saami ay ka heshay lacag dhan 25 bilyan oo doolar.
Inta badan shirkadda saliida ee Aramco ayaa ku tiirsaneyd maalgashatada gudaha iyo kuwa dalalka Carabta.
Iibinta saamigan ayaa qeyb ka ah qorshe uu in muddo ah damacsanaa dhaxal sugaha dalka Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, oo horay u sheegay in uu doonayo in uu casriyeeyo dhaqaalaha dalka Sacuudiga, sidoo kalena uu meesha ka saaro ku tiirsanaanta Sacuudiga uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha uu ka helo shidaalka.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in ay u baahan tahay tobanaan bilyan oo doolar, si ay ugu maalgeliso mashaariic waaweyn iyo warshado cusub, waxaana hataan muuqtaa in shirkadda ay markii uu horeysay tijaabineyso saamiga maalgashatada kale.
Sacuudiga ayaa markii hore damacsanaa in uu iibinta saamiga shirkadda Aramco kasoo xareeyo lacag dhan 100 bilyan oo doolar, hasayeeshee waa ay ka laabatay qorshahaas, maadaama dadkii maalgashan lahaa ay walaac ka muujiyeen isbadelka cimilada, khatarta siyaasadeed ee ka jirta gobolka iyo shirkadda oo sida ay wax u wado aysan kala cadeyn.
Arrintan ayaa imaaneyso xilli Sacuudiga uu Magaalada Viena kula kulmayo dalka Ruushka iyo dalalka kale ee dhoofiya shidaalka, si ay uga wada hadlaan wax soo saarka saliida.
Dalalkan ayaa soo saara afartan boqolkiiba shidaalka dunida laga isticmaalo.
Bartamihii sanadkii 2014-ka ayay ahayd markii uu hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka dunida, taas oo culeys dhaqaale ku keentay dalalka soo saara.
Suuqa shidaalka ayaa haatan la kulmaya culeys, maadaam ay jiraan dalal kale oo iyaguna bilaabay in ay soo saaraan saliidda.
Saddex sano kahor markii shirkadda saliida ee Aramco ay ku dhawaaqday in ay tahay shirkadda ugu faaidada badan caalamka ayaa qiimaha shirkaddaas ay ka joogtay suuqyada caalamka waxaa uu ahaa inkayar laba tiraliyan oo doolar, arrintaas oo aad uga yar wixii uu filayay Maxamed Bin Salmaan.
Khubarada dhanka dhaqaalaha ee caalamka ayaa inbadan ka digay in shirkadda Aramco ay wajaheyso caqabada dhowr ah oo ay kamid tahay dalabka saliida ceyriinka ee caalamka oo hoos u dhacay, taas oo mixnad horleh ku noqon karta Aramco iyo maalgashiga ay damacsan tahay mustaqbalka.
Sidoo kale xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalalka Carabta ayaa ah khatar kale oo ay wajaheyso shirkadda shidaalka ee Aramco.
Aarhus/ Covid-19 : 25 Kamid ah darawalada Basaska magaalada oo…
Kunde bedt om at holde afstand: Så gik han amok